Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Gedo. – Bogga Calamada.com
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kufaarta Xabashida Itoobiya ayaa ka dhacay degmada Baardheere ee gobalka Gedo.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin weerar culus ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen garoonka Diyaaraha degmada Baardheere oo ku yaala duleedka degmadaasi.
Dadka ku dhaqan degmada Baardheere waxey sheegeen in dagaalkan uu ahaa mid aad u culus islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,waxeyna warar hoose sheegayaan iney jirto khasaara soo gaartay ciidamada Amxaarada Itoobiya.
Dagaalkan waxa uu imaanayaa xilli Labadii habeen ee lasoo dhaafay dagaallo culus oo khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka kala dhaceen Xerada Maslax ee magaalada Muqdisho iyo deegaanka Ambareeso ee duleedka degmada Baraawe ee gobalka Shabeelada hoose.